Isiokwu Afọ 2015—Abụ Ọma 106:1
“Keleenụ Jehova, n’ihi na ọ dị mma.”—Abụ Ọma 106:1
Ụmụ Izrel kwesịrị ikele Jehova n’ihi na ọ napụtara ha n’aka Fero na ndị agha ya n’Oké Osimiri Uhie. Anyị kwesịkwara iji obi anyị niile na-ekele Jehova. Nke bụ́ eziokwu bụ na anyị nwere ike ịda mbà n’obi ma ọnwụnwa tara akpụ bịara anyị. N’oge ahụ, icheta ihe ọma Jehova meerela anyị ga-akasi anyị obi, meekwa ka okwukwe anyị sikwuo ike.
Otu n’ime ihe ọma Jehova meere anyị bụ na o kwere anyị nkwa na ọ ga-anapụta anyị n’ihe ọ bụla na-akpatara anyị nsogbu na obi erughị ala. Obi siri anyị ike na Jehova agaghị ahapụ anyị n’agbanyeghị ihe isi ike ọ bụla anyị nwere ike inwe. Jehova, Onye na-azụ anyị dị ka atụrụ, hụrụ anyị n’anya. Ọ na-enyekwa anyị ihe ọ bụla dị anyị mkpa ka anyị nwee ike ife ya nke ọma. Ọ dịghị mgbe Jehova ga-ahapụ anyị. Ọ bụ ‘ebe mgbaba anyị na ike anyị. Ọ dịkwa njikere inyere anyị aka n’oge nsogbu.’ (Ọma 46:1) Ọ bụrụ na anyị ana-atụgharị uche ná ngọzi ndị a, ọ ga-eme ka anyị die nsogbu ọ bụla kacha taa akpụ nwere ike ịbịara anyị. N’afọ a, ka anyị niile na-atụgharị uche n’ihe ọma ndị ahụ Jehova meere anyị. Ka ha meekwa ka anyị ‘kelee Jehova, n’ihi na ọ dị mma.’—Ọma 106:1.